जाडो मौसममा कसरी बनाउने मसरुम र हट एन्ड सावर सुप ? यस्तो छ सरल विधि «
जाडो मौसममा कसरी बनाउने मसरुम र हट एन्ड सावर सुप ? यस्तो छ सरल विधि
काठमाडौं । जुन सुकै मौसम खान मिल्ने तथा शरीरमा तागत दिने भनिएको सुप हो बिशेस गरि जाडो मौसममा । बिरामी हुँदा पनि भेज सुप खान सकिन्छ र सुप आफैँ पनि बनाउन सकिन्छ । यहाँ दुईवटा सुप बनाउने तरिकाबारे जानकारी दिन खोजिएको छ । एउटा मसरुम सुप र अर्काे हट एन्ड सावर सुप बनाउने विधिबारे तलको तरिका पढ्नुहोस
मसरुम सुप कसरी बनाउने ?
मसरुम सुप बनाउन मसरुम १० ग्राम, लसुन ५ ग्राम, मैदा ५ ग्राम, बटर २ चम्चा, नुन र मरिच स्वादअनुसार, तेज पत्ता १ ग्राम तथा स्टक २ कप सामाग्री चाहिन्छ । यी सामान जुटाइसकेपछि भाँडामा बटर तताएर लसुन फुराउने । मसरुम र मैदा हालेर एकछिन पकाउने । त्यसपछि स्टक हालेर पाक्ने गरी उमाल्ने । यसरी मसरुम सुप तयारी हुन्छ ।
कसरी हट एन्ड सावर सुप बनाउने ?
यो सुप बनाउन गाजर ५ ग्राम, तोफु ५ ग्राम, क्याप्सिकन(रातो र पहेंलो) २–२ ग्राम, सिमी ५ ग्राम, कर्नफ्लोर २ टेबुल चम्चा, हट सस १ चम्चा, भिनेगर १ टेबुल चम्चा, तिलको तेल १ चम्चा, अदुवा र लसुन २ चम्चा, हरियो प्याज १ ग्राम, स्टक २ कप तथा सोया सस १ टेबुल चम्चा सामाग्री चाहिन्छ ।
यी सामान जुटाइसकेपछि भाँडामा पानी बसालेर सबै भेज हाल्ने । आवश्यकताअनुसार नुन, मरिच, भिनेगर, सोया सस, तिलको तेल, हट सस, कर्नफ्लोर हालेर विस्तारै चलाउँदै सुप तयार हुन्छ ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका– ७ शान्तिनगरमा पहिरोका कारण जेखिममा रहेको घर
नेपालगन्जस्थित ट्राफिक प्रहरी पोष्टमा वर्षौदेखि थन्किएका चोरीका मोटरसाइकल । तस्वीर
महाकाली नदी किनारबाट आइबार देखिएको सूर्यग्रहण (फोटो फिचर)
कञ्चनपुरको महाकाली नदी किनारबाट आइबार देखिएको सूर्यग्रहण । तस्बिर ः
कोरोना सङक्रमित महिलाको व्यवस्थापन गर्दै नेपाली सेनाको टोली (फोटो फिचर)
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहीबार मृत्यु भएकी